Alahady faha-28 Taona A Mandavantaona - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady faha-28 Taona A Mandavantaona
Daty : 11/10/2008
Rahefa miresaka fanasana isika dia mazava loatra fa tsy maintsy misy safidy izany. Iza no hantsoina, iza no hasaina? Sao adino ny manasa an’i…! Mazàna dia ny manan-kaja sy ny manan-katao no voalohan-disitra, inona no antony? Adino ary toa odiana tsy hita ny hafatr’i Kristy manao hoe : “Raha manasa olona hisakafo antoandro na hariva hianao, aza dia ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny mpanan-karena mifanakaiky aminao no asaina, fandrao asain'ireo koa hianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy.” (Lk 14,12)
Tsy zava-bita hifampitsarana anefa ny hazakazaka ho amin’ny fanjakan’ny lanitra, ka ho ampy ny manao soa be dia be! Tsy ny soa vita no hidirana any an-danitra fa ny faharetana amin’ny fanaovan-tsoa! Aza adinontsika ny vakiteny roa alahady lasa izay , na ny Evanjelin’ireo niasa tany an-tanimboaloboka adiny iray monja. “Horovitina eo amin’ny tendrombohitry ny Tompo ny voaly manarona ny olona rehetra” (Vakiteny I Iz 25, 6-10) ka “hihanjahanja sy hiarihary eo imason’Izy hampamoaka antsika ny zavatra rehetra” (He 4, 13).
< Alahady faha-29 TAona A Mandavantaona
Alahady faha-27 Taona A Mandavantaona >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0720 s.] - Hanohana anay